Igumbi elikhanyayo, lodwa, ngokohlobo
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMadeleine
Uya kuhlala kwigumbi kwindlu entle, eqaqambileyo, ephangaleleyo entliziyweni yendalo, imizuzu emi-5 (ngemoto) kunye nemizuzu engama-20 (ngeenyawo) ukusuka kumbindi wedolophu yaseyunivesithi yaseLouvain-la-Neuve. Uya kuba neendawo zabucala ezigqibeleleyo kodwa kwakhona, ngokweminqweno yakho, ingcebiso yam kunye nobubele bam. Ungeza wedwa Igadi isesandleni sakho.
Ukusukela ngoku andizukwazi ukwamkela abahambi ixesha elingaphantsi kobusuku obu-3. Ukubonelela ngamashiti kunye neetawuli kancinci kuthatha umsebenzi omninzi! Ukuba umhambi unokuza namashiti akhe kunye neetawuli, ndingamhlalisa, ukusuka ngobusuku obuthathu ndibonelela ngamashiti kunye neetawuli.
Ifakwe entliziyweni yendalo, xa uhamba ukuya esiphelweni sesitrato ungena kwi "Bois des Rêves" uhambo oluhle kakhulu. Kwakhona imizuzu emihlanu ukusuka eLake Louvain-la-Neuve kunye nefama yeEquestrian.
Ndingumamkeli okhoyo kwaye onomdla kwaye ndiyabuhlonipha ubumfihlo bakho ngokunjalo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ottignies-Louvain-la-Neuve